warkii.com » Atiriisho Bollywood oo sheegtay inee xog kaheyso kiiska Sushant, Shekhar Suman oo dowlada hindiya canaantay iyo jawaabtay booliska sugayaan!!
Sawirro: Rag loo haysto kiiska Xamdi oo maanta maxkamad lagu soo taagay Muqdisho
Atiriisho Bollywood oo sheegtay inee xog kaheyso kiiska Sushant, Shekhar Suman oo dowlada hindiya canaantay iyo jawaabtay booliska sugayaan!!
Atiriisho caanka ah Bollywoodka ayaa sheegtay ine xog ka heyso kiiska Sushant Singh Rajput sida uu sheegay nin joornaaliste ah soina daabacay waxuuna tilnaamay inee booliska isaga lasoo xiriiran si uu isugu xiro atiriishadaas iyo booliska xogtana ugu gudbiso ah ka heyso kiiska Sushant.
Waxuu joornaalistaha sheegay in atiriishadan ay saaxiib dhow ka ahed Sushant wax badana uu usheegi jiray oo noloshiisa kusaabsan marka waxay leedahay Suhant arimo badan uu iisheegay ayaan haya booliskana anfaceyo waana la qariyay magaca atiriishadan kahor inta aysan xogta gudbinin waxaana hada la sugaya inee booliska gabadhaan wareystaan bal hade xog kiiska fududeyneyso ka helaan.
Dhanka kale Shekhar Suman oo siyaasada ku biiray misane atoore ahaan jiray ayaa qoraalo baraha bulshada soo dhigay uu ku dhaliilayo dowlada hindiya waxuuna yiri isagoo hadlaayo,”Sushant qoyskiisa siyaasad kuma jiraan cid awood lehna kama dhalan cid caawisana wuu la’yahay.”
“Waxaan la yaabanahay sababta dowlada kiiska Sushant oga seexataya maxaa CBI loogu gudbin la’yahay kiiskan ileen booliska seddex todobaad kabadan ayee meer-meerayaan waxna ma aysan soo saarin, aniga iyo dhamaan shicibka waxaan dalbaneena CBI in kiiska lagu wareejiyo sida ugu dhaqsiyaha badan.”
Ugu dambeyn boolisna Bandra waxay sugayaan jawaabta baaritaanada sida weyn usocdaan ee kala ah -ka Sushant ayaa baaris kusocoto maadama la sheegay in qoraalo lasoo dhigay saacado kahor geerida Sushant dhanka kale waxaa baaris kusocoto qolka Sushant ku noolaa labadaas dhinac jawaabta kasoo baxdo ayaa dhagta loo wada taagaya.